Kodak na-ebupụta Bitcoins Miner ya Akụkọ akụrụngwa
Kodak yiri ka o werewo ntinye ya n'ime ahịa crypto kpọrọ ihe. Naanị ụnyaahụ ya na-ezube ịmalite cryptocurrency nke gị. Mana o yiri ka agụụ na-agụ ụlọ ọrụ ahụ ebe ọ bụ na ha jiri ọnụnọ ya na CES 2018 gosipụta otu ihe ọhụụ. Ha gosiri a Bitcoins Ngwuputa igwe. Ọ rute ahịa n'okpuru aha nke KashMiner.
Ọ bụ ezie na ngosi nke ngwaahịa a na-abịa ọbọp ke esemokwu. Ọ bụghị nke ukwuu maka ngwaahịa ahụ n'onwe ya, mana n'ihi mkpebi nke Kodak iwere akụkụ nke ihe mepụtara n'otu. Ebe ọ bụ na onye ọrụ ga-enye ọkara nke uru na ụlọ ọrụ.
Kodak's Bitcoins miner bụ eziokwu
E mepụtara igwe ahụ site na Kodak na Spotlite na ha chọrọ ịwụ elu na ahụ ọkụ cryptocurrency ma nye igwe arụpụtara maka ebumnuche ahụ. A na-akwụ $ 24 ụgwọ maka nkwekọrịta ọnwa 3.400. N'ime afọ abụọ a echere ya kee Bitcoins ruru $ 375 kwa ọnwa. Agbanyeghi na ngụkọta ego etinyego na akaụntụ na uru nke mkpụrụ ego bụ dollar 14.000. Yabụ dị ka atụmatụ Kodak si dị, n'ihe dị ka afọ abụọ ị na-emepụta ihe dị ka $ 9.000.
Kwa ọnwa ha ga-abanye na akaụntụ Coinbase jikọrọ ọnụ na onye ọrụ na-efunahụ ọkara nke ihe ha na-emepụta. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ na-ewe ya. Na mgbakwunye, ha na-ekwu na onye na-egwuputa ihe a na-eri otu ihe ahụ dị ka draịja ejikọtara ụbọchị niile.
Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, enwere ugbu a ngụkọta nke ndị na-egwuputa ihe 80, ma nke ahụ n’ime izu ole na ole ga-abụ 300 n'ihi na ina e nwere ukwuu. Yabụ ọ dị ka ọ nwere ike bụrụ ihe kụrụ n'ahịa. Ọ bụ ezie na anyị ga-ahụ otu o si agbanwe. Ihe ha kwuru bụ na oriri dị ala karịa kọmputa ndị ọzọ nke emebere maka otu nzube ahụ.
Na netwok a gwakọtara echiche banyere onye na-egwuputa ihe a Kodak. Kemgbe ọtụtụ na-ahụ uru nke ngwaahịa a, mkpebi ụlọ ọrụ ahụ anabatabeghị ọkara. Na mgbakwunye, na ngụkọta oge nke ụlọ ọrụ ahụ anaghị amasị ndị ọrụ. Ebe ọ bụ na enweghị nkwa na Bitcoin ga-anọgide na $ 14.000 n'ime afọ abụọ.
Na nkenke, enwere ọtụtụ amaghị, ya mere ọ ga-adị mkpa iji hụ otú ngwaahịa a si agbanwe n'ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Kodak weputara onye nke ya bu bitcoin onye na-egwuputa ihe
Sony na-akụ nzọ na nnukwu ụda soundbars na CES